ကြှနျုပျတို့အကွောငျး - Dongguan အမြဲစိမ်းတံဆိပ် Co. , Ltd
DONGGUAN အမြဲစိမ်းတံဆိပ် CO ။ , LTD မှ။ locates next to the International Fabric and Garment Accessories Trading Center in Chashan town, Dongguan City of Pearl River Delta, with convenient transportation and beautiful environment.
လှံတံ၏ပူးတွဲကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများ၏အတိတ်ဆယ်စုနှစ်များတွင်အမြဲစိမ်းကွဲပြားခြားနားစက်မှုလုပ်ငန်းမှတစ်ခုတည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကနေစတင်ခဲ့တဲ့တစ်ဖှံ့ဖွိုးတိုးသင်တန်းကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ အဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အတူပေါင်းစပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပို. ပို. တတ်ကျွမ်းနည်းစနစ်, သိပ္ပံနည်းကျစီမံခန့်ခွဲမှုအပေါ်အခြေခံပြီးကျနော်တို့ဖောက်သည် '' လိုချင်သောစံနမူနာများနှင့်ဒီဇိုင်းများကိုအညီအပြည့်အဝအမျိုးမျိုးသောချယ်လှယ်သောထုတ်ကုန်ထုံးစံ-ထုတ်လုပ်ဖို့ကောင်းသောအနေအထား၌ရှိကြ၏။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အကွာအဝေးကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူများကိုအားလုံးထိုကဲ့သို့သောကျောင်းများ, အားကစားအဖွဲ့အစည်းများ, အစိုးရအေဂျင်စီများ, အမျိုးမျိုးသောအသင်းအဖွဲ့များနှင့်အများအပြားကပိုအဖြစ်, အသက်ရှင်ခြင်းကိုလမ်းလျှောက်အဖုံးကို .. ဝတ်စုံအစိတ်အပိုင်းများ, အဝတ်အစားအသုံးအဆောင်များ, ကြော်ငြာ, မြှင့်တင်ရေးလက်ဆောင်များနှင့်စသည်တို့ကိုလည်းပါဝင်သည်။
အမြဲစိမ်း၏ထုတ်ကုန်ဒဏ်ငွေလက်ရာနှင့်အတူသာလွန်အရည်အသွေးရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာချီတက်ခဲ့ကြပြီးကျနော်တို့သိပ္ပံနည်းကျထုတ်လုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်တင်းကျပ်သောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်အားချမှတ်။ ကျနော်တို့စဉ်ဆက်မပြတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များကချီးကျူးခဲ့ကြရသောကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ဒဏ်ငွေအရည်အသွေးကိုဂုဏ်သတင်းနှင့် prompt ကိုပေးပို့ထားရန်ကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေး, တိုးတက်လာဖို့ဆက်ကပ်အပ်နှံကြသည်။
အဆိုပါကုမ္ပဏီအရည်အသွေးကိုဘဝကြောင်းအလေးအနက်ဆိုသည်နှင့်အစဉ်မပြတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လူ့အဖွဲ့အစည်းများအတွက်တန်ဖိုးကိုဖန်တီးဖို့ကိုယျ့ကိုယျကိုမွှုပျနှံရနျကြှနျုပျတို့၏လိုက်စားဖြစ်ပါတယ်။ "လူ့-orientation ကို, ကောင်းသောအရည်အသွေး, ရိုးသားမှုနှင့် Co-ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ" ၏စီးပွားရေးအတွေးအခေါ်နဲ့အညီကျနော်တို့စိတ်ရင်းမှန်နဲ့, ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်စုံစမ်းရေးကော်မရှင်သို့မဟုတ်စေ့စပ်ညှိနှိုင်းဖို့အသက်ရှည်သမျှလူတန်းစားပေါင်းစုံကနေကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ဖောက်သည်ကြိုဆိုပါတယ်။ ကျနော်တို့အတူတူနေတဲ့တောက်ပအနာဂတ်ကိုဖန်တီးရန်သင်နှင့်အတူနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအောင်ဖို့မျှော်လင့်ကြသည်!
1, ကျနော်တို့အဝတ်အစားအဘို့အတံဆိပ်များနှင့် accessories များတဲ့ professional ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ကြသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်နည်းပညာရှေ့ထွက်လာခြင်းဖြစ်သည်။
2, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထောက်ပံ့ရေးဖောက်သည် '' ဝယ်လိုအားအာမခံဖို့လုံလောက်ပါတယ်။
သငျသညျပန်းထိုးတံဆိပ်များ, CHENILLE patch, ယက် patch, ဆိုးဆေးသူတော်ကောင်းတရား Print တံဆိပ်, EPAULET နှင့်အခြားဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များဝယ်နိုင်ဘယ်မှာ 3, ။
4, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်သင့်ရဲ့အထူးလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်း, OEM နိုင်ပါတယ်။
5, ကျနော်တို့ကိုကမ်းလှမ်းအဆိုပါထုတ်ကုန်အထင်ကြီးအရည်အသွေး, ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စျေးနှုန်းများနှင့်အချိန်ပေါ်ဖြန့်ဝေ၏ဖြစ်ကြသည်။
6, ကျနော်တို့ဖောက်သည်များ၏သတ်မှတ်ထားသောတည်နေရာပေးပို့ဖို့ကုန်ပစ္စည်းများပိုမိုထိရောက်သောနှင့်ဘေးကင်းစေနိုင်သောရေရှည်သမဝါယမအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး, ရှိသည်။
Chenille Patch ပေးစာ, Chenille Varsity ပေးစာ T က Patch, ချိတ်, Loop ယက်တံဆိပ် , ချယ်လှယ်သောတံဆိပ်, Chenille ပေးစာ Patch ကို, Chenille Varsity ပေးစာ, အားလုံးထုတ်ကုန်များ- 粤ICP备18108880号-1